Ngaba iyinyaniso ukuba i-Amazon com iyinjini entsha yokukhangela iimveliso?
Ngamanye amaxesha ndiva abantu besithi i-Amazon com iyinjini entsha yokukhangela ngokukhethekileyo eyenzelwe iimveliso, kunokuba ingcaciso yayo engapheliyo njengendawo yokugcina indawo ekhompyutheni kunye nokuthunyelwa kwe-intanethi kwi-intanethi. Ngoko ke, yinyaniso kangakanani le ngcamango yokuba i-Amazon iguquke kwinjini yokukhangela imveliso-eyona yinyani kunokuba sinokuyicinga? Ngenhlanhla, ndineenkcazo ezikholisayo ezivela kwisifundo esandula kutshanje malunga nobuchwephesha bokuthengiswa kwe-intanethi. Olu phando luthi luqhutywe ngamazwe amane ahlukeneyo kunye nesigqubuthelo ekusebenzisweni kwesitolo ngexesha elinye. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa iimiphumo ezithakazelisayo kwaye uzama ukuphendula umbuzo oyintloko apha kweli bali.
Abantu abaninzi nabaninzi basebenzisa i-Amazon njengenjini yokukhangela ulwazi lomkhiqizo. Ngokwenzululwazi, uphando lwentengiso lubandakanya abathengi abayiwaka abavela eUnited States, kunye nabathengi ababenxulumene neJamani, iUnited Kingdom kunye neFransi-malunga nama-7 ama-respondents ngalinye kwilizwe ngalinye (ngo-2017 Agasti):
Ngaphezu kwe-70% yabathengisi be-intanethi bavakashela i-Amazon kuqala kwaye kubaluleke kakhulu, xa kuziwa ekufundeni okungakumbi malunga nemveliso ethile (njengexabiso langempela, ukuhlaziywa kwabaxumi, iinkcukacha zeemveliso, iingongoma zokusetyenziswa, njl. isigqibo sokwenza ukuthenga.
Phantse i-25% yabasebenzisi abasebenzayo abapheqululayo kwicandelo lokubuyisela i-intanethi baqinisekisile ukuba baya kwi-Amazon ukuba bafumane okungakumbi malunga nemveliso abayidingayo, bafunde iimpawu zayo, iintengo eziqhelekileyo kunye nezinye iipropati - nje ngokuba babesesitrateni sokwenene sitena kunye nomdaka.
malunga ne-55% yabathengi abakhutheleyo kwi-Amazon bavuma ukuba basebenziselwa ukukhangela ngokutsha umkhiqizo ngokuthe ngqo apho, malunga nantoni nayiphi na imveliso ekhoyo xa kuthengiswa.
Ngokuqwalasela ukuba i-Google isathatha malunga no-85% ophando lwemveliso yamakhasimende anxulumene nemveliso, isithuba sinokuthi sivale nayiphi na enye, ngaphandle kwexesha elikhawulezayo elindelekileyo.
Kukho icandelo elitsha lokuthengiswa kweentengiso ezingabonakaliyo kunye ne-ecommerce shishini kunye nokuthengiswa kwemveliso yokuthumela izinto ngokukodwa. Ngokuphathelele i-Amazon ngokwayo, le ndawo ephakamileyo eyaziwayo ye-digital marketplace ibonisa ukuba ii-smartphones zitshintsha indlela esithenga ngayo. Kuthetha ukuba abathengi abaninzi nabasebenza ngokukhawuleza bavumelanisa inkqubela phambili yangoku kwi-search-friendly friendly. Kwaye i-Amazon com kunye ne-injini yayo yokukhangela kunye neeprogram ze-algorithm ezijoliswe kumveliso ayikho ukukhutshwa kulo mgaqo. Kuthetha ukuba zonke iingcamango zanamhlanje okanye ukuthengiswa kunye nokukhuthazwa kwe-intanethi zithatha ukutshintsha.
Masibhekane nayo - iipatheni eziqhelekileyo zokuziphatha kwabathengi zisanda kutshintshwa kwiqondo elithile. Ndiyathetha ukuba yonke i-shopper ekhoyo ngoku iyakwazi ukudala uluvo lwakhe nokwakha ithemba ngokulindela ukuphononongwa kwemveliso kunye nolunye ulwazi olukhoyo kwi-Intanethi, kunokuba lithembele kubasebenzi abadayisayo. Kwaye kungakhathaliseki ukuba ngaba basebenzi abanolwazi kangakanani-ukuba i-industry ye-retail isabone ukukhukuliseka ngokupheleleyo kweendawo zayo, izikhala kunye namaphuzu okuthengisa.